Indlela yokutsala iNdoda yoMhlaza: Fumana iingcebiso zethu eziphezulu zokukhohlisa - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Amadoda omhlaza charm us kunye necala labo zothando kunye nosapho ezijoliswe. Umbuzo ngowokuba utsala njani indoda yoMhlaza? Sityhila iingcebiso zokuhenda ukumenza owakho!
Ukuba uthandana nendoda yoMhlaza, uwile kwi-teddy bear yeempawu zezodiac. Nangona, oku akuthethi ukuba akanabuntu! Nangona, sisenokukulumkisa; phantsi kwenkangeleko yakhe ekhululweyo ifihla uthando olukhulu kunye nobuntu obunentloni kakhulu. Ukuba uphupha ukukhutshwa ezinyaweni zakho ngumfana onxibelelene ngokupheleleyo neemvakalelo zakhe, ngoko ngokuqinisekileyo nguyena kuwe. Njengomlinganiswa obuthathaka kakhulu, ufuna indlela ethambileyo yothando kwaye unesidingo esikhulu, kodwa ngenxa yeengcebiso zethu zokuhenda, uya kuyazi kakuhle indlela yokuzizalisekisa.
Umhlaza ngumntu onothando nenkathalo kakhulu. Njengolona phawu lunobuthathaka, benza yonke into ngothando, yiyo loo nto bengabona bathandi bathambileyo.
Bunjani ubuntu boMhlaza?
Ngubani ohambelana naye?
Kutheni simthanda nje
Ngaba uza kulufumana uthando kulo nyaka?
♋ Umntu woMhlaza unothando, unothando kwaye unobubele! ♋
Umhlaza ngumlinganiswa othambileyo ngokwenene! Nangona kungekho ndlongo ngokupheleleyo, olu phawu aluthobeki kangako. Aba bafana banetyala lokwakha iindonga ezibangqongileyo ngelizama ukuzikhusela! Njenge uphawu lwezodiac olubuthathaka , olu phawu lunomdla kwaye lunomdla kwabanye.
Aba bantu bomthonyama bayasixabisa isingqisho esiqikelelwayo esibanika ukhuseleko noqinisekiso kuba bona musa jongana notshintsho kakuhle kakhulu. Ngokwenene, bangabantu abanovelwano nabanyanisekileyo, nabo basikelelwe ngengqondo enkulu. Baphupha ubomi bentsapho obulula nobonwabileyo kwaye ekugqibeleni bafuna nje ukuba ngabazali.
Bahlala bezoyika iingxabano, iingxabano kunye neengxabano, ezichaza isizathu sokuba bahlale bezama ukulungisa iingxaki ngaphambi kokuba zivele. Uyiqikelele, Umhlaza uya kwenza nantoni na ukukholisa abanye kwaye ube luncedo, nokuba ngabantu abamngqongileyo, usapho lwakhe kunye okanye asebenza nabo.
-Fumana njani I-Mercury ibuyisela umva iya kukuchaphazela. -
'Ungaze uwajongele phantsi amandla okanye intuition yalo mqondiso'.
Fumanisa indlela yokutsala amadoda esebenzisa iimpawu zabo zeenkwenkwezi .
Indlela yokutsala indoda yoMhlaza: Yiba nokuqonda kwaye uthabathe ulawulo
La madoda aphupha ngokudibana a iqabane elineempawu ezininzi zobumama. Esinye isiqingatha sakhe esifanelekileyo sisincinci somphuphi kwaye sifuna ukuqinisekiswa kunye nokukhuselwa. Lo ngumqondiso obeka iindawo ezininzi ukubaluleka kwikhaya kunye nosapho, yingakho ephupha ukudibana nomfazi ofuna abantwana. Ukufumana ukuthenjwa kwakhe kunokuthatha ixesha kuba uhlala efuna ukuqiniseka ngokhetho lwakhe.
Umfazi wekhaya ufanelekile kakhulu kulo mfo! Ukutsala indoda kwaye umenze isithandwa sakho, kuya kufuneka chitha ixesha elininzi kunye naye kwaye umqinisekise.
-Ufuna ukufumana eyakho uphawu olunyukayo ? Yibone apha! -
Ukuhenda umntu ozelwe kulo mqondiso kuzisa isiqinisekiso esithile, kuba baphakathi kwabo oyena uthembekileyo kuyo yonke i-zodiac. Ukuqhatha umntu abelana naye ubomi bakhe ngokuqhelekileyo akade athi ncam kuye. La madoda angamaqabane abalaseleyo, eneneni asondele ngokunzulu kwintsapho yawo nakubantu abathandayo. Masijongane nayo, ukutsala inzalelwane yoMhlaza kuya kukhokelela ekuzibandakanyeni kubudlelwane obulawulwa yinkqubo yesiqhelo.
Aba bafana banamathele ngokunzulu kwizithethe zabo kwaye abakuxabisi ukungaqiniseki okanye nantoni na ebakhuphayo kwindawo yabo yokuthuthuzela. Indoda eqhelekileyo yoMhlaza iyazithandabuza. Uhlala esoyika ukuthetha into ebudenge okanye ephuma kwisihloko. Ke, xa kuthethwa ngokuncwasa, aba bantu bomthonyama abakhe babe kumgangatho ophezulu ngokwenene. Inyaniso, bakhetha ukuba wenze ukuleqa kuba ingqina ukuba uzinikele kangakanani na.
Ungabonisa umdla wakho ngokujonga nje inkanuko okanye amagama amnandi. Oku kuya kuqinisekisa ukuba uziva ezithembile kwaye uya kumqinisekisa ukuba unayo into efunekayo ukuthandana nawe. Ngoko, ulindele ntoni? Thatha inyathelo lokuqala kwaye wenze inyathelo lokuqala ngaphandle kokwenza nantoni na ngaphezulu. Ngapha koko, la madoda athanda abafazi bokwenene nabanyanisekileyo abangayivayo imfuneko yokuchukumisa abanye. Ukuthetha malunga nokungakhuseleki kwakho kuya kumkhuthaza ukuba athathe inyathelo eliya kuwe ngokuthandana.
❤ Unjani eluthandweni? ❤
Ngothando, indoda yoMhlaza inenjongo enye ephambili kwaye luzinzo. Xa sele efumene ibhinqa elilungeleleneyo elinomnqweno wokwakha ubuhlobo obunzulu, akayi kuthandabuza ukuzibophelela kuye. Ngapha koko, akalohlobo lokucinga malunga nombuzo wokuba umfumene na umntu ofanelekileyo. Ngothando, uziphatha njengendoda enesidima okanye umtsalane wesikolo esidala kwaye wenza konke okusemandleni ukuze enze iqabane lakhe lonwabe. Kuye, akukho mntu ubalulekileyo!
Nangona ebonakala ngathi yibhere ethandekayo, xa ethandana, unokuba nobutyebi kakhulu. Unemfuno ephantse ibaluleke kakhulu yokuba neqabane lakhe 24/7 kwaye akathandi ukuba kude kakhulu neqabane lakhe ixesha elide. Ukuxhomekeka kwakhe ngokweemvakalelo ngamanye amaxesha inokuboyikisa okanye yothuse abantu.
Kwi-flipside, amadoda oMhlaza eluthandweni athembeke kakhulu, unokuhlala uthembele kuwo… Xa esemathandweni uya kumenzela nantoni na iqabane lakhe.
Xa eziva ekhululekile, ubonakala ethetha yaye eqhula. Nostalgic ngokwendalo, unika ukubaluleka okukhulu kwiinkumbulo zakhe zangaphambili, ebuntwaneni bakhe kunye nemfundo awayifumanayo. Uyazihlonela izithethe yaye ufuna ukuba zihlale zikho. Uzimisele kwaye unesiphiwo ngokubanzi kwimisebenzi yakhe yobuchwephesha, akaze aziqhayise ngempumelelo yakhe. Akafane athethe ngeminqweno namaphupha akhe, ukuya kuthi ga kwinqanaba apho abantu bayazibuza ukuba uyakoyika na ukuphoxa abantu xa bengaphumeleli.
Ukuhambelana nomhlaza: Ngubani umdlalo wakho ogqibeleleyo?
Indoda yoMhlaza idinga ibhinqa elikwaziyo ukumqonda kwaye Eyona midlalo yakhe ibalaseleyo yiPisces kunye neScorpio. Owasetyhini ofanelekileyo kuye kufuneka amnike inkxaso engenamiqathango kwaye amkhuthaze ukuba athathe imingeni emitsha. I-Scorpio kunye ne-Pisces yabasetyhini banayo ubuntununtunu nokuthantamisa okuyimfuneko ukuze umqonde kwaye bayakwazi ukumfunda ngaphandle kwemfuneko yencoko ende kunye nokutshintshiselana. Ubudlelwane phakathi kwabo ngokubanzi buya kuba namandla kakhulu kwaye bunzulu. Ngokudibeneyo, baya kuseka ukuqonda okuzalisekisayo kwaye bafikelele kwinqanaba lolonwabo kunye notshintshiselwano olugqithileyo okunzima ukuluchaza.
Imidlalo yomhlaza eluthandweni:
Ukuhambelana kweCancer kunye neScorpio
Ukuhambelana kweCancer kunye nePisces
Imfuno yakhe yokhuseleko kunye nengqalelo ichukumisa kakhulu. Ekubeni unothando lokwenene, akalibazisi ukuya konke ukuze azuze intliziyo yomntu. Ukutya okukhanyiswe ngamakhandlela kunye nokuhamba emaphandleni kuphakathi kwemihla yakhe yamaphupha! Unomonde, uyaqonda kwaye uyapha. Kamsinya nje akuba efumene iqabane lakhe lomphefumlo, akacingi nto yimbi ngaphandle ukuqala usapho!
Zeziphi izinto azithandayo?
Ikhaya lakhe libalulekile kwaye uyakuthanda ukuchitha iiyure elenza ukuba lamkeleke ngakumbi. Yena uchitha iimpelaveki zakhe ezingela kwiivenkile ezithengisa izinto ezisetyenzisiweyo, kwiivenkile ezithengisa iiyadi, nakwiivenkile zakudala.
Uhlala efumana into emangalisayo anokuyenza! Uthanda imisebenzi ye-DIY, ukusebenza egadini, okanye ukulungisa ifanitshala. Uthanda izinto azonwabisa ngazo emanzini okufana noku: ukuqubha, ukukhwela iphenyane, ukuloba, okanye uhambo olude olujikeleza ichibi.
Ngaba uya kulufumana uthando ngo-2021?
Eyona nto ihambelanayo ngo-2021:
Ngaba kunokwenzeka ukuba athandane ngo-2021 ?:
Umhlaza + Taurus
Iingcebiso ezingakumbi zokuhenda:
Ihoroscope yomhlaza ngo-2021
Ihoroscope yomhlaza namhlanje
I-horoscope yothando ngo-2021
Izizathu ezi-5 zokuwela kwiiPisces ezinomdla